Xukuumadda FS oo si kooban uga Hadashay Doorashadii shalay ka dhacday Somaliland - SHABAKADDA WARBAAHINTA GEESGUUD | SHABAKADDA WARBAAHINTA GEESGUUD
Xukuumadda FS oo si kooban uga Hadashay Doorashadii shalay ka dhacday Somaliland
Muqdisho (PP) ─ Kulan gaar ah oo ay maanta yeesheen Golaha Wasiirrada Soomaaliya, ayaa lagu Meel-mariyay Miisaaniyadda Dowladda Federaalka Somalia ee Sannadkan soo socda ee 2018-ka, isla markaasna Hambalyo loo diray Doorashooyinka Somaliland.
Golaha Wasiirada ayaa ugu horreyn warbixin ka dhageystay guddi wasiiro ah oo daraasad kusoo sameeyey dar-dargelinta xasilinta waddanka, gaar ahaan Muqdisho. Guddigaan ayaa warbixin dheer ka dib ay soo jeediyeen tallooyin muhiim ah oo ay ka mid ahaayeen in amniga caasimada la deegaameeyo oo barnaamijka dariseynta la dhaqangeliyo, in la diiwaangeliyo gaadiidka iyo guryaha, in taariko gaar ah loo sameeyo caasimada si gaadiidka soo galaya loo ogaado, in aaladaha casriga loo isticmaalo amniga iyo in wacyigelin buuxda bulshada loo sameeya si ay amniga kaalin buuxda uga qaataan. Golaha ayaa ka dooday oo su’aalo weydiiyey guddiga, ka dibna isku raacay in waxii tallooyin dheeri ah loo soo gudbiyo hay’adaha amniga si loo dardargeliyo barnaamijka xasilinta dalka.
Sidoo kale, Wasiirka Maaliyadda XFS ayaa Golaha Wasiirada u soo bandhigay Miisaaniyadda 2018-ka oo faahfaahsan una sharaxay Muhiimadda ay u leedahay dalka. Miisaaniyadan ayaa ah mid si casri ah loo soo diyaariyey kuna timid wadatashiyo lala sameeyey dhammaan hay’adaha dawliga ah oo ay ku jiraan dawlad goboleedyada, iyadoo diirada lagu saaray adeegyada bulshada sida waxbarashada, caafimaadka, oo weliba la qorsheynayo in Iskuulo lagu dhiso, iyadoo weliba miisaaniyad loo qoondeeyey lagu xoojinayo afka Soomaaliga oo la dhisayo xaruntii Akademiyada Afka Soomaaliga. Sidoo kale waxaa miisaaniyadan ku jiro in la dhiso warshada dharka ciidamada, dhismaha hay’adaha horumarinta dhaqaalaha iyo miisaaniyad loo qoondooyey la dagaalanka musuqmaasuqa. Golaha Wasiirada ayaa dood dheer ka dib ansixiyey miisaaniyada 2018 oo dhan $274,640,191 (labo boqol iyo toddobaadan iyo afar Milyan, lix boqol iyo afartan kun, boqol iyo sagaashan kow dollar).
Ugu dambeyn, Golaha Wasiirada Xukuumadda Soomaalya ayaa dhageystay warbixin la xiriirta doorashooyinka ka socda Deegaannada Somaliland iyo ololahii ballaarnaa ee doorashadii shalay ka horeysey. Dood dheer ka dib, Golaha Wasiiradu waxey aad u ammaaneen isla markaasna ay hambalyo u direen doorashooyinka Somaliland oo si nabad ah u dhacay, kuna tilmaamay doorashooyin si dimoqraadiyad ah u dhacay oo xitaa ka fiican wadamada galbeedka qaarkood. Golaha ayaa sheegay inay habboon tahay in warbixinta rasmiga ah laga sugo guddiga doorashooyinka oo cidii ku guuleysata la soo dhoweeyo lalana shaqeeyo.
The post Xukuumadda FS oo si kooban uga Hadashay Doorashadii shalay ka dhacday Somaliland appeared first on Puntland Post.